Cristiano Ronaldo oo ka warbixiyay waqtigiisii ugu fiicnaa sanadka saacada uun kaliya ka harsan ee 2018 – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo ka warbixiyay waqtigiisii ugu fiicnaa sanadka saacada uun kaliya ka harsan ee 2018
Dajiye December 31, 2018
(Juventus) 31 Dis 2018. Weeraryahanka kooxda Juventus Cristiano Ronaldo ayaa shaaca ka qaaday, waqtiydii ugu fiicnaa ee sanada 2018 oo caawa kaliya ka harsan.
Cristiano Ronaldo ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Calcio Mercato” ee dalka Talyaaniga wuxuu kaga hadlay:
“Waqtigeygii ugu fiicnaa sanada 2018 waxa ay ahayd markii aan qaaday Champions League markii shanaad xirfadeyda kubada cagta, sidoo kale markii saddexaad ee xiriir ah aan la qaaday kooxda Real Madrid”.
“Sidoo kale waxaan dhihi karaa xiliga aan imid kooxda Juventus, kadib markii ay si fiican iila dhaqmeen”.
“Waxaan dareemayaa inaan aad ugu faraxsanahay marka aan kubada cagta ku ciyaarayo hal qaab ciyaareed maalin kasta, waxaan dareemaa in aan sameeyo waxa aan jeclahay maalin kasta, weli waxaan dareensanahay inaan doonayo inaan sameeyo intii aan awoodo, weli waxaan doonayaa inaan hormar sameeyo si aan kooxdeyda uga caawiyo inay ku guuleysato koobab”.
“Waxaan dareemayaa inaan shaqo fiican ka qabanayo dhinacyo badan, waxaana sii wadi doonaa shaqadan sanadooyin kale, ma xiiseenayo abaal marinada shaqsiyadeed, waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan si wada jir ah koobab ugu guuleysano isla markaana aan kooxda caawino”.
“Liverpool waa kooxda ugu xoogan Yurub” - Guardiola oo hadalkan sheegay kahor kulanka Khamiista
Buffon oo ku tilmaamay fadeexad in ilaa iyo haatan Neymar uusan ku guuleysan Ballon d'Or